Iimpawu zepirate: Uhlalutyo olusebenzayo lwemirhumo | Martech Zone
Iimpawu zePirate: Uhlalutyo olusebenzayo loMrhumo
NgoLwesibini, Januwari 22, 2013 Douglas Karr
Siphila kumaxesha apho kuya kusiba lula kwaye kube lula ukwenza ezakho izisombululo. Uninzi lwezixhobo zemveli kwi-Intanethi zakhiwe ngexesha elahlukileyo- apho i-SEO, ukuthengisa umxholo, imidiya yoluntu, iAjax, njl. Kodwa sisaqhubeka sisebenzisa izixhobo, sivumela ukutyelelwa, ukujonga iphepha, ukugquma kunye nokuphuma kwilifu kwisigwebo sethu singazi nokuba ziyazichaphazela ngokwenene okanye hayi. Iimpawu ezibaluleke kakhulu azifumaneki kwaye zifuna uphuhliso olongezelelekileyo kunye nokudityaniswa.
Iimpawu zePirate ikunceda wenze uhlalutyo oluninzi kunye nothelekiso lweshishini lakho ngokulandela umkhondo weendlela ezi-5 eziphambili (AARRR):
Ukufunyanwa -Ufumana umsebenzisi. Kwimveliso ye-SaaS, oku kuhlala kuthetha ukubhalisa.
Ukusebenza -Umsebenzisi usebenzisa imveliso yakho, ebonisa utyelelo lokuqala oluhle.
Ukugcinwa -Umsebenzisi uyaqhubeka nokusebenzisa imveliso yakho, ebonisa ukuba bayayithanda imveliso yakho.
encoma -Umsebenzisi uyayithanda imveliso yakho kangangokuba ubhekisa kwabanye abasebenzisi abatsha.
Ingeniso -Umsebenzisi uhlawula.
Iimpawu zePirate isekwe ngokukhululekileyo kwi- Iimpawu zokuqalisa zePirates zenziwa nguDave McClure, kodwa abaphuhlisi abafunanga nje ukwenza isixhobo sohlalutyo esiya kulandelela xa kusenzeka izinto ezinomdla. Bayile i-Pirate Metrics ukunceda ukusombulula enye ingxaki, eyi ukuthengisa usetyenziso lwewebhu.
Iimpawu zePirate uqokelela iimetrikhi eziphambili ezi-5 kwiveki yeqela, uze uthelekise loo veki ngokuthelekisa umndilili wokuqengqeleka. Ngokwenza inqaku lemisebenzi yentengiso eyenziweyo phakathi evekini (kuqhuba umkhankaso wentengiso, ukuvavanya i-A / B, ukwakheka kwamaxabiso, njl.njl. I-AARRR amaxabiso.
Iimpawu zePirate ikwavelisa ingxelo yentengiso ehlaziywa ngokuqhubekayo. Kwingxelo yentengiso, bajonge iipateni kwindlela yokuziphatha kwabasebenzisi bakho, emva koko banike iingcebiso ngeendlela zokuphucula amanani akho e-AARRR.
Ingxelo yentengiso yemba nzulu kubalo lwe-AARRR, kwaye inike iingcebiso ngeendlela zokuphucula la manani. Umzekelo, i-Pirate Metrics ichonga abasebenzisi abangakhange benze owona msebenzi ubalulekileyo ukusukela oko bagqibela ukuhlawulela inkonzo yakho, ukuze unxibelelane nabo ukuze ufumanise ukuba banengxaki na ngaphambi kokuba barhoxise ngaphandle kwesilumkiso. Iqonga likwachonga ukuba abasebenzisi abasebenza ngokucothayo okanye ngokukhawuleza ngakumbi kunomyinge wokuqengqeleka baxabisa imali ethe kratya, ukuze wenze isigqibo esifanelekileyo kuliphi iqela oza kugxila kulo kwimizamo yakho yentengiso.
Ngokwenyani akukho mveliso eyilelwe ngokukodwa ukulandelela imicimbi ye-SaaS, uhlalutye loo datha, kwaye emva koko unike izisombululo eziza kunceda elo shishini lenze imali ngakumbi. Iimpawu zePirate ibonelela ngovavanyo lwenyanga e-1 oluqala xa umsebenzisi omtsha eqala ukusithumela idatha, kunye nolwakhiwo lwamaxabiso asemgangathweni aqala kwi- $ 29.00 ngenyanga.
tags: okwexeshanaUkufumanaUhlalutyo olusebenzayoku sebenzaUhlalutyodave mcclureIimpawu zepirateUkuthumelaukugcinwa
Izipho zoLuntu kunye noLuhlu lweMinqweno
I-Sendgine: Cwangcisa oololiwe bakho bokucinga